မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....: ကျွန်တော်ကြိုက်၏ မကြိုက်၏
တာလေးတွေလုပ်နေ၊တွေ့နေကြုံနေရရင် စိတ်ချမ်းသာတာကတော့အမှန်....၊ဆိုတော့..ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်
လူတစ်ယောက်ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်တယ်....လို့ ပြောလေ့ပြောထရှိကြတယ်ဟုတ်.....။ကျွန်တော်လည်းလူတွေ
ကိုကြည့်ရင် ဘာရယ်မဟုတ် ခြေဖမိုးတွေကို ကြည့်မိတယ်ဗျ....။ခြေဖမိုးလေးတွေ ဖြူဖွေးသန့်ရှင်းနေရင် အဲ့လူကို
ကျွန်တော့်ခြေထောက်ကိုလည်း ဖြူဖွေးနေမှ ကြိုက်တာကလား...၊အပြင်ကပြန်လာတာနဲ့ခြေအရင်ဆေးတာပဲ....။
ရေချိုးရင်လည်း ဒီပြင့်အခြားနေရာသာချေးမတွန်းကာမှမတွန်းရော....၊ခြေဖမိုးတော့ ဘရပ်ခ်ျအသေးလေးနဲ့
တိုက်တော့တာပါပဲ...။အဲ....ခက်တာက ကျွန်တော်က အသားဖြူတဲ့သူမဟုတ်တော့ကာ ဘယ်လောက်တိုက်
တိုက် ချေးသာပြောင်ရင်ပြောင်မယ်.... ဖြူမလာပါဘူးဗျာ...၊တလောက ပန်နစူလာမယ် ညီမငယ်တစ်ယောက်နဲ့
တွေတော့ သူက အမှတ်တမဲ့ ကိုကြီးခြေထောက်လေးတွေဖွေးနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တော့ ဘာပြောကောင်းမ
လဲ....ချက်ချင်း မြနန္ဒာကိုခေါ်သွားပြီး သူစားချင်တာဝယ်ကျွေးပလိုက်တယ်.....:D။
နောက်....ကျွန်တော်ကြိုက်တာတစ်ခုက ဆံပင်တိုတာ....။ငယ်ကတည်းက ဆံပင်လေးနဲနဲရှည်လာရင်ကိုမနေ
လေးတွေကလည်း ဆံတိုလေးတွေခင်ဗျ.....:)။အတော်များများကတော့ ဆံပင်ရှည်ရှည်ကောင်မလေးတွေ
နဲ့ ထိုးဖွပြီး ကျီဆယ်ဆော့ကစားရတာကို သိပ်သဘောကျတာ....။သူကစိတ်ကောက်ရင် ကိုယ်ကပြန်ချော့၊ပွ
ကုလားထိုင်မယ် ထိုင်တဲ့အခါ ခြေချိတ်ပြီးထိုင်တာကို ကြိုက်တယ်။ဒူးနှစ်လုံးကိုထပ်၊လက်ဝါးနှစ်ခုကိုပတ္တာဆက်၊
ဆက်ပြီး ဒူးမှာချိတ်၊လေထဲမှာလွတ်နေတဲ့ ခြေထောက်ကို တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ကိုယ်တွေးချင်တာတွေးနေတတ်တာက
ကျွန်တော့်အကျင့်ရယ်....။တလောက ရုံးမှာ ဘာမှလုပ်စရာမရှိကြတာနဲ့ အကုန်စုထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြရော၊
ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်အကျင့်အတိုင်း ခြေချိတ်ထိုင်ပြီး ခြေထောက်လေးတစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ အာဝါဒါး ဖုတ်
နေတာပေါ့ဗျာ...၊ကျွန်တော်တို့ဘော့စ်က သူ့ရုံခန်းထဲကထွက်လာပြီး ကျွန်တော့်ဘေးနား ရို့ရို့လေးလာရပ်ပြီး
သက်သက်လာရွဲ့တာလေ.....:)။ကျွန်တော်လည်းခပ်တည်တည်နဲ့ ဘာတုန်းဘော့စ်ရဲ့ လို့ပြန်မေးတော့ မင်းထိုင်
နေပုံက ဟိုက်ဘော့စ်ကြီး ထိုင်နေပုံမိုို့ပါကွာ...တဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်း ဟုတ်တယ်...ဘော့စ်ပေးတဲ့လစာက
များလွန်းလို့ ဒီနှစ်ကုန်မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး သူဌေးကြီးပြန်လုပ်မလို့ လို့ပြန်ပြောပလိုက်တယ်...၊ဘော့စ်တစ်ချိုးတည်း
ပြေးရော.....။(ကျွန်တော်တို့သူဌေးက ကပ်စေးနဲ၊သူ့ကိုစိတ်ပျက်စေချင်ရင်၊ဂျီတွန်ချင်ရင် ငွေရေး၊ကြေးရေးကိစ္စ
အတော်များတယ်....။ငါးဆို ငါးခူ၊ငါးကျည်းနဲ့ ငါးမြင်း ပဲစားတယ်...။ဒါတောင် ငါးကျည်းဆိုကြော်မှ၊ငါးခူးဆိုချက်မှ။
အမဲသားလည်းမကြိုက်တာရော၊ငယ်ကတည်းကတစ်အိမ်လုံးမစားတာကြောင့်ပါ မစားဖြစ်ဘူး၊ဒီရောက်မှ ရံဖန်
ရံခါစားဖြစ်ရဲ့...၊ကြက်သား၊ကြက်ဥ၊ဘဲဥ လည်းမကြိုက်၊ဒီတော့ ကျွန်တော့်မယ်စားစရာဆိုလို့ ဝက်သားပဲကျန်
တော့တယ်....:)။ငယ်ငယ်ကဆို ပြတ်တုန်းလပ်တုန်း နှစ်ဆယ့်သုံးကျော်ပြီဆိုရင် အိမ်မှာ ဘဲဥဟင်းချက်ပြီ....။
ကျွန်တော်ကလည်း စိတ်ကောက်ပြီ....။ထမင်းမစားဘူးလုပ်ရော...၊အမေကတော့ မစားနေ..အကုန်သက်သာ
စာ အခေါက်ကင်ဖြစ်ဖြစ်၊ဝက်သားပေါင်းဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ကျွေးရှာတယ်....။အိမ်ထောင်ဦးစီးဖခင်ဆိုတော့ အိမ်မှာ
အသီးအနှံဆိုရင်လည်း ကန်စွန်းရွက်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကိုတော့အသေကြိုက်....။အဲ...ကျန်တာတွေကိုတော့ကြိုက်
တယ်မဟုတ်...၊ရွေးစရာမရှိမှသာစားရတာရယ်.....။နောက်..ကျွန်တော်တို့ တစ်အိမ်လုံး၊တစ်မျိုးလုံး ငပိရည်စား
ကြတယ်၊ငပိရည်မှမပါရင် ထမင်းစားမဝင်ကြဘူးရယ်...။အဲ....ကျွန်တော်ကျတော့မှ ငပိရည်ခွက်ကို ယောင်လို့
အဲဒီိလိုဝယ်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်နဲ့က တစ်ရန်....။အဲဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ထမင်းဟင်းကျက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်
က ဦးဦးဖျားဖျား တစ်ယောက်တည်းအရင်စားပြီး အိမ်နဲ့ဝေးရာပြေးတော့တာပဲဗျိုး.....။သူရို့တွေကတော့ ပါစွန်ကို
အဝတ်အစားတော့ သိပ်ချေးမများဘူးလို့ထင်မိတာပဲဗျာ....:)။အဲ...ဒါပေမယ့် ရှပ်အကျီင်္ကိုဝတ်လေ့ဝတ်ထမရှိဘူး
ဗျ....၊ကြယ်သီးတွေတပ်ရ၊ဖြုတ်ရတာ စိတ်မရှည်ဘူး....။ရှားရှားပါးပါး ရှပ်အကျီင်္ဆိုလို့ကျွန်တော့်မှာတစ်ထည်
တည်းရှိသဗျ....။လည်ကတုံးအကျီင်္အဖြူတွေကိုတော့ကြိုက်တယ်...။ခက်တာက အဖြူရောင်က စွန်းထင်းလွယ်
တော့ မဝတ်ချင်ဘူးဗျ...။နောက်မကြိုက်တာက စတိုင်ဘောင်းဘီတွေ...၊ဝတ်ဘူး....ဘယ်တော့မှ....:D။ဂျင်းပင်
ပြော ကျွန်တော်ကဦးဂျမ်းမှ ဦးဂျမ်း....။လုံးဝမဝတ်တဲ့ပုဆိုးက ကချင်လုံချည်နဲ့ ယောလုံချည်....။ဘာကြောင့်မှန်း
မသိ....အဲ့ပုဆိုးနှစ်မျိုးကို ကြိုက်ကိုမကြိုက်တာ.....ဘယ်လောက်အစွဲအလန်းကြီးသလဲဆို ရေလဲပုဆိုးတောင်
အဖေ့ကချင်ပုဆိုးအဟောင်းလေးနဲ့ တခြားချည်လုံချည်အဟောင်း နှစ်မျိုးရှိရင် ချည်လုံချည်နဲ့ပဲရေလဲလုပ်တာ...။
ရောက်ပြီဆို ဖိနပ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့အမေ ရန်ဖြစ်ရပြီ....။အမေက မိုးတွင်းစီးဖိနပ်ပဲစီးဖို့ပြော
သည်...။ကျွန်တော်ကမစီး...။ကတ္တီပါဖိနပ်ကို နှစ်ရံဝယ်ပြီး စီးသည်။တစ်ရံမိုးစိုလျှင် အိမ်နံရံမှာထောင်ထားပြီး၊
လုံချည်လေးဝတ်ထားလိုက်လျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သန့်သန့်နှင့်ခန့်ခန်ကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်အထင်ရှိချေသည်
အင်း...ခုလိုကျွန်တော်ကြိုက်၏၊မကြိုက်၏ တွေကို ချရေးကြည့်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ငါ...အတော်ဇီဇာကြောင်
နေပါလားဟူ၍ တွေးမိချေသည်...။သို့ပေမယ့်ကြောင်ကာမှကြောင်ရော....၊သူများကိုမထိခိုက်သ၍တော့ ကိုယ်
တလောက daily likes၊daily dislikes တွေ ပျော်ပျော်ပါးပါးရေးကြတာ တစ်ဝကြီးဖတ်လိုက်ရပါတယ်....။
ကျွန်တော့်ကြိုက်၏မကြိုက်၏လေးကတော့ တစ်နေ့စာမဟုတ်တဲ့ တစ်ဘဝစာကြိုက်ခြင်း၊မကြိုက်ခြင်းတွေ
ပေါ့လေ....။ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အခြားသူတွေရဲ့ ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းတွေကို နဲနဲစပ်စုပါရစေဗျာ...:D
အရင်ဆုံး ဘလော့ခွင့်ခဏခဏယူပြီးညန်မာပြည်ပြန်ပြန်လစ်တတ်တဲ့၊ကျွန်တော်မှာလိုက်တဲ့ ပြာကညို ကိုလည်း
ရော့တစ်ယောက်တစ်ဝက်ဆိုပြီး ဝေစားမျှစားလုပ်တတ်တဲ့ ဖိုးကြယ်လေး(ကြယ်လွမ်းသူ) ကိုထိတ်ဆုံးက တဂ်
နောက် ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ခေါင်းကို ကြံရည်ကြိတ်စက်ထဲထည့်ပြီး အိုင်ဒီယာတွေညှစ်ထုတ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ
ပြီး ပါစင်နယ်တွေရေးရင် ဖတ်တဲ့သူကိုပြုံးနေအောင်ရေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ညီ...မောင်မျိုး.....၊(ရေးပြီးသားဆိုလည်း
နောက်တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး....ကိုရဲ (အမှတ်တရနေ့စွဲများ)
ပြီးတော့ ငါ့ကိုတော့မတဂ်ပါနဲ့ ခေါင်းရှုပ်မခံချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုလတ်(အမှောင်ထုထဲကအလင်းစက်များ)(သောက်
ညှင်ကပ်လို့တဂ်တယ်...မရေးရင် နင့်အကြောင်းတွေ ဖဘမှာဖွင့်ချမယ်...ဘာမှတ်တုန်း...:))))
အရမ်းအလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ၂ရက်မှ ၄နာရီသာသာပဲအိပ်ချိန်ရတယ်ဆိုတဲ့ မိုးယံ.....(ဖြေးဖြေးမှပါ အားမှရေး....:))
နောက် အတော်လေးအားနေပုံရတဲ့ နတ်ဆိုးလေး......
ပြီးတော့.....ခုတလောပြန်ပျောက်သွားတဲ့ ရှေ့နေလေး ကိုကိုးအိမ်..(သူပြန်လာရင် တဂ်ပို့စ်နဲ့ပြန်ပြန်လာတာ...:))
တို့ရဲ့ သူကြီး ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ)
ပြီး....လူကြီးပေါက်စလေးအလား တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေရေးတတ်တဲ့ နေဝသန်(နေဝသန်ရဲ့အိုအေစစ်)
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ အလှူ့လက္ဘက်လေးတွေ၊စုံစီနဖာလေးတွေအရှာအဖွေတော်တဲ့ ဘဘ ခေါ်
(ဘလော့လေးရေးတာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီ...၊ကျွန်တော်ကစပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မတဂ်ဖူးပါဘူး...၊ကိုယ့်လာတဂ်ရင်သာ
သေဖော်ညှိတဲ့အနေနဲ့ တဂ်တာပဲရှိပါတယ်....၊ခုကလည်း ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပါ၊နောက်တဂ်တော့ဘူးနော်..၊
Posted by ညိမ်းနိုင် at 7/24/2011
Labels: ဘဝအပိုင်းအစများ, အမှတ်တရ
ကညိမ်းနိုင် တက်ဂ်ထားတယ်ဆိုတာ ဒါကိုလား... :( စာရေးက ပျင်းပါဘိသနဲ့ပါဆိုမှ. လူဇိုး.. ဘကြီး စိတ်လာပျိုးတစ်ရာ.. စိတ်လာရင် ရေးပေးမယ်.. ဒါပဲ :)
ဘာတွေလဲ ဘယ်လိုပြန်ရေးပေးရမှာလည်း ....ဖတ်ရင်းနဲ့ငိုချင်လာတယ် ...
ဒုက္ခဘဲ။ ခြေထောက်ဖြတ်ယူထားချင်တယ်ဆိုလို့လန့်သွားမိတယ်။ ယောက်ကျားလေးအများစုကဆံပင်ရှည်တာဘဲကြိုက်ကြတာ သူ့ကျမှ။
ထင်တော့တယ်တယ်.. နောက်ဆုံးမှာ တက်တာလေးတော့ပါမယ်လို့.. :D.. ကိုမောင်လေးနဲ့ဆင်သလို မတူသလိုပဲ.. ကျွန်တော်က ခြေဖမိုးမကြည့်ပဲ ခြေသည်းကြည့်တာဗျ.. ခြေသည်းလက်သည်းရှည်နေတဲ့သူဆို ကျွန်တော်သိပ်ရွံတာ... :D.. ခြေကိုချိတ်ပြီးလည်း ထိုင်ချင်တာ တပိုင်းသေပဲ.. ခက်တာက လုံးဝထိုင်မရဘူး.. ထိုင်မရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်.. ဘာကွာတာလဲတော့မသိဘူး.... :D.. ဆံပင်ကလည်း မတိုမရှည်ပေါ့.. ရှည်ရင်ပုံသွင်းလို့ရတယ်လေ.. တိုနံ့နံ့တော့ အသက်ကြီးရင်ထားရမှာမို့ အခုတော့ မထားရေးချမထား... :D.. ဟိဟိ...
(နောက်အပတ်ရေးမယ်နော်.. ကြာသပတေးကျော်ရင်.. )
ခြေဖမိုးလေးတွေ ဖြူဖွေးသန့် ရှင်းနေတာ၊ ဆံပင်တို ကြိုက်တာ တူတယ်ဗျ။
ပျော်စရာပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူး ခြေထောက်လေးတွေ လှတဲ့ ကောင်မလေးတွေ အစ်ကို့အစားရှာထားပေးမယ်နော့် ပျိုပျို အိုအိုဖြစ်တယ်ဟုတ် ။
ဖတ်လို့ကတော့ကောင်းမှကောင်း....ထင်တော့ထင်နေသလိုပါပဲလားပေါ့..အရင်ပြောသလိုပဲ ထိတ်ဆုံးကမှ ထိတ်ဆုံးကပဲ :) ရေးမယ်ဗျား...ရေးဦးမယ်ဗျား...ဒီမှာပုံတွေတင်ရတာခက်နေတာနဲ့ အတော်ရယ်... :D
မောင်လေး ရဲ့ တက်ဂ်စာလေး ကိုလာဖတ်သွားတယ်
ဟုတ်ပြီ..၊ မြနန္ဒာမှာ ထမင်း အလကား စားချင်ရင် ဘယ်သူ့ကို ဘာပြောရမလဲဆိုတာ သိသွားပြီဗျ၊း) ဒီမှာတော့ ခြေဖမိုးလေးတွေ မြင်ရဖို့ အခွင့်အရေးက နွေရာသီလောက်ပဲ ရှိတာ..၊ ကျနော်ကတော့ ကချင်နဲ့ ယောလုံချည်ကို အတော်လေး ဝတ်ခဲ့သေးတယ်ဗျ၊ ဒီပို့စ်လေးက ဘလော့ဂါနဲ့ စာဖတ်သူကို ပိုပြီး ရင်းနှီးလာ စေတဲ့ တံတားလေး တစ်စင်းပါပဲ...။
ကိုဧရာကတော့ ခရုပုဆိုး အပြာကွက်လေးတွေ ၀တ်ခဲ့တာတော့
(အို..ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရေးတယ်အေ...းP)
မောင်လေး ခြေထောက်လေး ဖွေးနေတာပဲနော်
(ကဲ အဲလိုပြောတဲ့သူ ထမင်းကြွေးချင်နေကျဆိုတော့ ဆိုင်ကောင်းကောင်း ရှာထားတယ်။ လိုက်ကြွေးပေတော့း)))
ခြေထောက်တကယ်ဖြတ်ယူမယ့်လူပဲ.... မန္တလေးက လူတွေ သတိထားနေကြပေရော့...... ခြေဖမိုးဖြူဖြူ ရွှေခြေကျင်းနဲ့ ဆို ဒင်းအကြိုက်ပဲတဲ့ဗျိုး....။
ရှပ်အကျီင်္ဝတ်စမ်းပါဟ..... ရှပ်လက်ရှည်ဝတ်ပြီး လက်ခေါက်ထားလိုက်..... သိပ်လူကြီးဆန်သွားမယ့် .. ကလေးကလား တွေ ၀တ်ရမယ့် အရွယ်လည်း မဟုတ်...။
မိုးယံကျ ဖြေးဖြေး.. ငါ့ကျ ရင့်သီးလှချည်လား..... ဟင်.....။
ငါ့စိတ်ကို သိတယ်ဟုတ်.......။ ထိုင်းလာမှ ငပိရည်၊ အမဲသားနှပ်၊ ကြက်ဥကြော်နဲ့ကျွေးအုန်းမယ်.... ။
(ရေးတော့ရေးမယ်..... ဒါမယ့် ကြာမယ်. ဒါဘဲ)
အွန်.... သူ ကြိုက်တာတွေက တစ်မျိုး... အနော့်ကို အားနေပုံရတယ်တဲ့...
သုံးလေးရက် အတွင်း ရေးပါ့မယ်...
ပြောလို့ သာ ပြောတာပါ.. တဂ်ပို့စ်ဆို မရေးရ မနေနိုင်ဘူး.. ခဏနေ ကောက်ရေးချင် ရေးမိတော့မှာ
ဦးလေးေ၇ ကျနော် ရေးပါမယ့်..အခု အလုပ်များပြီး ကွန်ပျက်နေလို့...ဘာမှမလုပ်နိုင်းဘူး....
ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးနောက် ယောက်ျားလေးတွေလဲ ဂျီးများပြီး ဇီဇာကြောင်ပါကလားဟူ၍ မှတ်ချက်ချလိုက်မိပါ၏။
ဖဘမှာ လိုက်နေတာကိုး....:D၊ ရှပ်အကျီင်္တော့ဝတ်ချင်ဘူး
ဦးဂျမ်းလုံးချည်ကြိုက်တာ ၊ မိုးတွင်းလည်း ကတ္တီပါပဲ စီးချင်တာချင်းတော့ အကျင့်တူပါ့ဗျာ။
အဲ... လောလောဆယ် သူဌေးချင်းလည်း တူသလိုလိုပဲး))
ဆိုက်ပရပ်စ်ကနေ အက်ဆစ်တစ်ပုလင်းပို့ပေးလိုက်မယ်၊ ခြေထောက်မှ မဟုတ်ဘူး၊ တစ်ကိုယ်လုံးဖြူချင်လား..ရတယ်..။
အဲဒီအက်ဆစ်ရည်နဲ့သာ ရေချိုးချလိုက်.. :D
အကြိုက်ချင်းတော့ တူသွားပီ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ကန်စွန်းရွက်နော်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
တဂ်ထားသကိုးဗျ။ ဒါကြောင့် ခုတလော မျက်ခုံးလှုပ်နေတယ် မှတ်တာ။ မအားလို့ ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်ဖူး။ (ရှူးးး တိုးတိုးးး။ အမှန်က မအားချင်ယောင် ဆောင်နေတာ)။း)))
တနေ့နေ့တကြိမ်ကြိမ်တော့ ကြိုက်၏ မကြိုက်၏တွေကို အငိုက်မိအောင် မိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။
တလောက မသက်ဝေတို့နဲ့ ဒေလီးဒစ်လိုက်ရေးဖြစ်သေးတယ်...။ ခု အဖြူရောင်နတ်သမီးက လာတဂ်ထားတယ်...။ ဒါကြောင့် သူများတွေဆီကုန်ကြမ်းလာယူနေတာ ဟိ...။
အကို့ ဘလောက်ဒ် ကိုရောက်မှ ကျွန်တော်တောင်
တကယ့် မောင်နှမအရင်း ညီကိုအရင်းတွေလိုပဲ
ကိုယ် ကိုတိုင် တဂ်မရေးတတ်ပေမယ့် သူများတကာတွေ
တဂ်ပို့စ် ဆိုရင်တော့ မလွတ်တမ်းကို လိုက်ဖတ်ပစ်တယ်
ရယ်လည်း ရယ်ရတာရယ် နောက်ပြီးတော့ ပျော်စရာလည်းကောင်တာ
ရယ်ကြောင့် ဘလောက်ဒ် ကိုကို မမ များမြန်မြန်တဂ်ပို့စ်ကို ရေးကြပါဗျို့။
လာလည်ကြတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ...၊ဒီရက်ပိုင်းလုံးဝမအားလို့ ကွန်မန့်တွေမပြန်နိုင်ဖြစ်သွားတာအားနာပါ
တစ်ချိုးတည်းပြေးအောင် ပြောလိုက်နိုင်တာကို သဘောကျသွားပါတယ်.... :D
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတော့ လူမြင်ရင် ခြေထောက်ကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ဖူးတယ်....လူတော်တော်များများက အပေါ်ပိုင်းကိုသာ ဂရုစိုက်ကြတာကိုး တော်တော်လေးကို ဂရုတစိုက်ရှိကြတဲ့သူမှပဲ ခြေထောက်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားကြတာလေ...ကြီးလာတော့လည်း စိတ်ဓာတ်ကိုပဲ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တော့တယ်...ခြေထောက်လေးတွေ ဖြူဖွေးသန့်နေပြီး စိတ်ဓာတ်ညစ်ပတ်တဲ့ မြန်မာပြည်က မော်ဒယ်ဂဲတွေကို အမြင်ကတ်လို့( အင်း...ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်...)
ခြေထောက်ပဲ ဂရုစိုက်တယ်ပေါ့။ ကျန်တာ ဘာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ . . . အဟပ်ဟပ်။
အကိုရေချာလပတ်လည်ရင်း အရောက်နောက်ကျနေတာ ခွင့်လွတ်...:) ကြိုက်မကြိုက်လေးတွေ လဲဖတ်၊ ကွန်မန့်လေးတွေကြောင့်လဲ ပြုံးသွားတယ်အကို...:)
ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ဘာပြောရမလဲ စဉ်းစားနေတာ မမေ ရေးတဲ့ ကော်မန့်ကို ဖတ်ပြီး တအားသဘောကျသွားတယ်... အဟဲ...း)))
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုး ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ခြေထောက်ဖြတ်ယူချင်တဲ့ အကြိုက်ကတော့ နဲနဲထူးဆန်းနေသလားလို့.. :D :D
နီကိုရဲရဲ့ လမင်းလိုက်မုဆိုးထဲက နားရွက်ဖြတ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ပြေးမြင်ယောင်မိတယ်..:D
တစ်ခါက ငါးဆယ့်တစ်လမ်းည ပုံပြင်